Olee otú iji nweta ọtụtụ ndị na-eso ụzọ? - Ihe omimi na-ekpughe ihe nzuzo nke Social Media
Maka azụmahịa ọ bụla n'ịntanetị, ịbawanye ọnụ ọgụgụ nke ụmụazụ gị bụ nrọ nke ọma.Ọtụtụ ndị na-emepụta ebe nrụọrụ weebụ e-commerce na-achọ inweta ihe kachasị mma na ọrụ ha, ya mere, ha na-achọ ịntanetị ọwa ahịa. Ahịa ahia gụnyere usoro dijitalụ dịka Search Engine Optimization (SEO) yana Social Media Marketing(SMM). Atụmatụ ndị a dị iche iche, ma ha niile na-eme ka ndị ọbịa bịa n'ọnụ ụzọ gị. Usoro mgbasa ozi mgbasa ozi dịka Facebook nwereihe na-eso nke ruru nde mmadụ abụọ na ụwa.
Mgbe onye na-ahụ ọdịnaya intaneti, AIRC ga-eme. Ihe omume a bụ ma ọdịnaya ọ na-apụta na SERP, mgbasa ozi ezubere iche maka nlegharị anya. Ebe nrụọrụ weebụ gị kwesịrị ịbụenwe ike ịrụ ọrụ a ma ọ bụ ihe ọzọ, usoro mgbasaozi mgbasa ozi agaghị arụ ọrụ. Dịka e kwuru n'elu, SEO na SMM kpọbatara ndị ọbịa na saịtị gị, nkeanọchite anya ụlọ ahịa anụ ahụ. Ozugbo i nwere ndị ọbịa ahụ, ọ bụ ọrụ nke ebe nrụọrụ weebụ gị iji mee ka ndị ọbịa a gaa ahịa.
Ivan Konovalov, onye ahịa nke na-ahụ maka ndị ahịa Ọkachamara Ọrụ Ntanetị, nyere ndụmọdụ bara uru banyere otu esi atụle nchịkọta netwọk mmekọrịta mmadụ.
Gbanyee ndị na-ege gị ntị
Na mgbasa ozi mgbasa ozi, ọ bụ maka ụmụazụ. Kwa ebe ị na-ahọrọ, ọ bụegwuregwu nke nọmba. Ọnụ ọgụgụ dị elu nke ndị na-eso ụzọ ka mma karịa ọnọdụ maka mgbasa ozi n'ịntanetị gị. Dịka ọmụmaatụ, Facebookna Twitter nwere ike inyere gị aka iwelie nọmba a site na ịkekọrịta ozi, retweets na ịmepụta ihe ndị dị mma..Ụfọdụ nkpuchi ojii ojii dị otú ahụ dị ka ụgwọ ndị na-esonụ nwere ike ọ gaghị egosi na ị ga-enwe ọganihu e-azụmahịa. N'ọnọdụ ọ bụla, ị nwere ike ịnweta ugwo na ogo na Google SERPs.
Otú ọ dị, ịnweta ịnọchi anya na mgbasa ozi mgbasa ozi abụghị ọrụ dị mfe. Ngwaọrụdị ka Klout nwere ike inyere gị aka inweta foto nke nzụkọta gị. Ha na-atụle mmetụta mmekọrịta mmadụ na ibe yana igosi gị ọdịnaya nke na-agagharị.
Dị ka SEO ọdịbendị, usoro mgbasa ozi dị irè gụnyere itinye ụfọdụ ahọrọ isiokwu ndị dị mkpa iji nyere gị aka n'usoro. Cheta, ụlọ ọrụ nyocha nke mgbasa ozi mgbasaozi na-akpa àgwà dịka nyocha ọchụchọ. Ọzọkwa,ọdịnaya nke mgbasa ozi ọha na eze na-agụpụta engines ọchụchọ. Mkpụrụokwu gị na ọdịnaya na ntanetị mgbasa ozi dị ka Facebook pụtara naSERPs dị ka ibe weebụ gị.
Mgbasa ozi netwọk mmekọrịta dị ka Facebook na Twitter nwere ezigbo ngwọta maka imemgbasa ozi n'ịntanetị. Ihe dị mma bụ, na mgbasa ozi akwụ ụgwọ, ịnwere ike imebi ndị na-enwe mmasị yiri nke ahụ. Iji ngwá ọrụ pụrụ iche, ịnwere ike iṅomi ndị na-eso ụzọ site na iji akara email gị dị ugbu a ma nweta ihe ọhụụ ọhụrụ. Mgbasa mgbasa ozi na-esote site na mgbasa ozinwere ike ime ka nrọ azụmahịa gị nwee ihe ịga nke ọma.
N'ahịa ahịa dijitalụ, mgbasa ozi mgbasa ozi bụ otu n'ime ahịa ahịa kachasị mmanhazi. Mgbasa mgbasa ozi nwere ike iru ọtụtụ nde ndị ọrụ n'ụwa nile. N'ihi ya, ebe nrụọrụ weebụ gị nwere ike ịnweta ụwa zuru ụwa ọnụ nke karịrị nde ndị debanyere aha. Nsogbu nke a bụ otu esi eme Social Media Marketing onwe ya. Akụkụ nke ngwọta nke a gụnyerendụmọdụ dị n'isiokwu a. Ị nwere ike iji data nchịkọta mgbasa ozi mgbasa ozi ma mee mgbanwe dị mkpa na ahịa gị n'ịntanetị mgbasa ozi. Atụmatụ ndị a ga-enyekwa aka mgbalị SEO site n'ịme ka ebe nrụọrụ weebụ gị dị elu na SERPs Source .